Ny ekipa Mpanohana Teknika dia eo ho anao isaky ny dingana amin'ny alàlan'ny serivisy mitohy izay avo lenta natao mba hiantohana ny fiasa isan'andro ny teknolojika fitsaboana anao dia mandeha hatrany amin'ny fampisehoana tampony. Ny fanohanana ara-teknika anay dia midika koa fa nasaronay anao tamin'ny tranga tsy fahita firy misy tsy fetezana ara-teknika, ahafahanao miroso amin'ny orinasa toy ny mahazatra ary misy fanelingelenana kely amin'ny andronao. Raha tsy azonao antoka ny dingana tokony hatao manoloana ny fitaovanao estetika dia antsoy fotsiny ny ekipanay - eto foana izahay hanampy.
Tombony fanampiana ara-teknika
Fahazoana ny fanampiana an-tariby any Melbourne
1. injeniera eo an-toerana an-tanana hanampy an'i Aostralia amin'ny ankapobeny
2. Andro iray mitovy amin'ny fandefasana fitaovana fampindramam-bola
3.Access amin'ny fanamboarana sy ny famahana olana amin'ny video
4. Serivisy fisian'ny fizarana fizarana
Ny fihazakazahana orinasa tsara tarehy mahomby dia tsy zava-bita ary tonga miaraka amin'ny fifaliana sy ny fanamby. Ny serivisy fanohanana klinika tsara anay dia ny fomba hanampianay anao hitantana tsara ny asan'ny salon, spa, toeram-pitsaboana na fanazaran-tena raha tsy dia misy adin-tsaina kely ianao, tsy misy vokatra loatra ary miantoka ny fizotran'ny klinika amin'ny fomba matihanina sy mahomby. Raha misy andro iray izay ahatsapanao fa mihoatra ny lohanao fotsiny. maninona raha miantso ny ekipa mpanohana klinika anay mba hanome toro-hevitra manam-pahaizana kely?
Tombony fanampiana amin'ny klinika
1. Fanohanana indostrialy mendrika amin'ny alàlan'ny telefaona sy mailaka.
2.Fomba fitsaboana amin'ny fikarakarana tsara ny serivisinao manara-penitra
3.Fahazoana taratasy fangatahana, taratasy fangatahana ary fanabeazana ho an'ny marary
4.Access amin'ny taratasy fikarohana ara-pahasalamana sy ny torolàlana momba ny fikaolojika amin'ny hoditra
5. Ampiasao ny horonan-tsary mpanohana anay, ny fomba fitsaboana ary maro hafa
Ao amin'ny The Zohonice Beauty Co.L Ltd. YAG Laser fanesorana tatoazy na fitaovana fanalana volo laser. Ity dia mba hialana amin'ny fihazakazahana sy fahatokisan-tena rehefa manao ny fitsaboana estetika vaovao, ahafahanao manome serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifanao izay mampivelatra ny tsy fivadihan'ny mpanjifa bebe kokoa ary ny tombom-barotra tsaratsara kokoa dia tonga ho an'ny orinasanao na eo no ho eo. mihazakazaka.
Tombony azo amin'ny fanofanana fitaovana
1.Program mandrakotra teoria. fampiofanana azo ampiharina ary diniho
2. Mianara avy amin'ireo mpanazatra manam-pahaizana manokana momba ny indostria
3. Ankafizo ny mianatra ao amin'ny toeram-piofanana maoderina mamirapiratra antsika
4. Fanamarinana fandraisana anjara omena rehefa vita
5. Famerenana indray ny fotoam-pivoriana hitazomana ny fenitry ny serivisy
Miaraka amin'ny fiofanana momba ny fitaovana matihanina sy ny fanohanana ara-teknika mitohy. tsapanay fa ny famoahana ny teny momba ny fitsaboana estetika vaovao manaitaitra anao dia zava-dehibe ihany koa amin'ny fahombiazana sy fitomboan'ny orinasanao manja. Izany no antony ampidirantsika ny varotra feno sy ny fanentanana amin'ny fividianana fitaovana rehetra. Ny loharanon-tsainay dia mamaky ny zava-drehetra manomboka amin'ny fampiroboroboana Facebook ka hatramin'ny fitaovana fampiroboroboana ao an-trano. Ary mazava ho azy, eo an-tànana ny ekipa mivarotra raha toa ka mila torohevitra momba ny fomba hahazoana antoka fa miavaka amin'ny vahoaka ny orinasanao.
Tombony fanampiana ny marketing
1. fidirana amin'ny afisy. brochure, template flyer ary tranombokim-tsary
2. Ampiasao ny fanentanana mailaka efa voavoatra efa vita sy ny atin'ny tranokala
3. Torolàlana momba ny haino aman-jery sosialy sy atiny ho an'ny maxi tsy ampy amin'ny fiparitahan'ny Internet
4.Access amin'ny menus fitsaboana, torolàlana momba ny vidiny ary teboka miresaka momba ny mpanjifa
5. Modely alohan'ny sy aorian'ny sary. horonan-tsary fampiroboroboana sy maro hafa